Mpikatroka mitaky ny hamaranana ny fanakatonana aterineto naharitra herintaona ao amin’ny fanjakana Rakhine sy Chin ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2020 8:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Ελληνικά, Español, Português, Français, English
Herintaona izay ny nameran'ny governemantan'i Myanmar ny tambajotran'aterineto finday any amin'ny tanàna miisa valo ao amin'ny fanjakana Rakhine sy Chin. Mihoatra ny 1,4 tapitrisa ny olona miaritra amin'ny fanakatonana ary tsy afa-mahazo torohay iankinan'ny aina amin'ny fiitaran'ny fifanandrinana ao amin'ny faritra sy ny resaka COVID-19 ao amin'ny firenena.
Ankilan'ny fanakatonana ny aterineto finday any amin'ny faritra sasany ao Rakhine sy Chin, nobaikon'ny governemanta ihany koa ny hanakanana ireo tranonkala heverina ho manaparitaka vaovao diso. Saingy tafiditra ao anatin'izany baiko izany ihany koa ny tranonkalam-baovao miahy tena sy ara-poko izay manome vaovao ao an-toerana.
Nanamarina ny faherintaona ny vondrona mpandala ny fahalalaham-pitenenana sy ireo vondrom-piarahamonina hafa ka nametraka ny fanoheran-dry zareo tamin'ny alalan'ny famoriana anjotra.
Athan, fikambanam-piraisamonina iray tarihan'ny tanora izay mampiroborobo ny fahalalaham-pitenenana nisioka ny amin'izany lanonana izany:
Nanoratra momba ilay hafatry ny sora-baventy i Thinzar Shunlei Yi mpandala ny zon'olombelona:
Nahatra ny fanapahana tamin'ny tanàna valo izay, araka ny Amnesty International, ahitana heloka an'ady ataon'ny tafik'i Myanmar, sy ny fihoaram-pefy ataon'ny Tafika Arakan, vondrona ara-poko iray mitam-piadiana miasa any andrefana sy avaratr'i Myanmar.
Linda Lakhdhir, mpanolotsaina ara-pitsarana ao amin'ny Human Rights Watch nilaza fa tokony hamarana avy hatrany amin'izay efa lasa fanapahana aterineto lava indrindra manerantany napetraky ny governemanta i Myanmar:
Niaro ny fanaovana ny fanakatonana ny governemanta sivilin'i Aung San Suu Kyi, mamerimberina hatrany fa ilaina ny fanakatovanana noho ny ady mangotraka ifanaovan'ny miaramila sy ny tafika Arakan. U Zaw Htay, mpitondratenin'ny biraon'ny prezidansa, vao haingana no nilaza tamin'ny Deutsche Welle fa azon'ny governemanta ny ahiahin'ny mpikatroka mpandala zon'olombelona, ao anatin'izany ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona, saingy ny filaminana aloha no vaindohan-draharaha any amin'iny faritra iny.
Tamin'ny 12 jona, nanambara ny ministeran'ny fitaterana sy ny fifandraisana fa hanitatra ny fanakatonana ny aterineto hatramin'ny 1 aogositra ny governemanta.
Any amin'ny fivoaran-draharaha hafa indray, nisy fitoriana (FIR) voarakitra manenjika an'i Maung Saungkha, mpikatroka iray amin'ny fahalalaham-pitenenana vao nahazo ny loka Tolipa avy any Holandy. Samy voampanga izy sy ny mpikatroka dimy hafa araka ny toko faha-19 amin'ny Lalànan'ny fivoriana sy filaharana milamina (PAPPL) amin'ny fanomanana fihetsiketsehana tsy misy fampilazana any amin'ny polisy. Miatrika telo volana an-tranomaizina izy raha meloka.
Maloto sy tsy azo ekena. Vao voampanga amin'ny and.19 amin'ny PAPPL noho ny hetsika anoherana ny fikatonan'ny aterineto tamin'ny faha-21 ny volana i @maung_saungkha , mpikatroka fahalalaham-pitenenana avy ao amin'ny @athan_info sy ny mpikatroka 5 hafa (mbola tsy fantatra).